Higuaín oo sharaxaad ka bixiyay xaqiiqada dhabta ah ee sababtay inuu fashilmo heshiiska uu ugu dhaqaaqi lahaa Chelsea – Gool FM
Higuaín oo sharaxaad ka bixiyay xaqiiqada dhabta ah ee sababtay inuu fashilmo heshiiska uu ugu dhaqaaqi lahaa Chelsea
Dajiye October 18, 2018
(Milan) 18 Okt 2018. Weeraryahanka reer Argentina ee Gonzalo Higuaín ayaa shaaca ka qaaday xaqiiqada dhabta ah ee sababtay inuu fashilmo heshiiska uu ugu dhaqaaqi lahaa kooxda Chelsea suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay.
30 jirka xulka qaranka Argentina ayaa ugu wareegay kooxda AC Milan hal xili ciyaareed amaah ah suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay, iyadoo ay Milan dooq u yeelan karto in dhamaadka xili ciyaareedkan ay si toos ah kula wareegto aduun dhan 18 milyan euro, hadii labada dhinac ay kuwada heshiiyaan.
Laakiin magaca Gonzalo Higuaín ayaa si weyn lala xiriirinayay kooxda ka dhisan galbeedka magaalada London ee Chelsea, kadib markii uu adeegiisa rabitaan xoogan ka muujiyay macalinka kooxda Blues ee reer Talyaani Maurizio Sarri.
Gonzalo Higuaín iyo Maurizio Sarri ayaa la fahansan yahay inuu ka dhaxeeyo xiriir aad u wanaagsan, kadib markii ay si wada jir ah uga soo wada shaqeeyeen kooxda reer Talyaani ee Napoli, balse ugu dambeyntii Higuaín ayaa heshiis amaah ugu dhaqaaqay kooxda Milan.
Hadaba Higuaín ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “La Gazzetta dello Sport” ee dalka talyaaniga wuxuu sharaxaad buuxda kaga bixiyay xaqiiqada dhabta ah ee sababtay inuu fashilmo heshiiska uu ugu dhaqaaqi lahaa kooxda Chelsea suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay.
“Way iska cadeyd in qof walba ee Milan ka tirsan isla markaana uu ugu horeeyo macalinka ay wada doonayeen inaan qeyb ka noqdo qorshaha kooxda, laakiin dhanka Chelsea waxaa saxiixeyga doonayay kaliya macalinka si aan ula shaqeeyo”.
Sidee lagu ogaada marka uu CAREYSAN/XANAAQSANYAHAY Lionel Messi?